SAWIRO:-Ciidamada Ammaanka oo fagaaro ku burburiyey Khamri ay soo qabteen - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Ciidamada Ammaanka oo fagaaro ku burburiyey Khamri ay soo qabteen
SAWIRO:-Ciidamada Ammaanka oo fagaaro ku burburiyey Khamri ay soo qabteen
Ciidamada Booliska Soomaaliya ee ku sugan degmada Cabudwaaq ee Gobolka Galgaduud ayaa Maanta waxaa ay goob fagaaro ah ku burburiyeen dhalooyin Khamri ah oo ay kusoo qabteen owlgal ay ka sameeyeen Xaafadaha Magaaladaas.
Taliska Booliska Caabudwaaq ayaa waxaa ay sheegeen in dhalooyinka Khamriga oo ku dhow 100 ay kusoo qabteen howlgal ay sameeyeen,isla markaana khamrigaas oo dhibaato ku haayay Bulshada.
Goobta fagaaraha ee Khamriga lagu burburiyey ayaa waxaa ku sugnaa qaar kamid ah Saraakiisha Ciidamada Booliska degmada Cabudwaaq iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada,iyaga oo daawanayay sida loo burburinayay dhalooyinka Khamriga.
Taliska Ciidanka Booliska Caabudwaaq ayaa u digay dadka ka Ganacsanaya iyo kuwa isticmaalaya maandooriyaha kala duwan,isla markaana dadkii lagu qabto tallaabo ka qaadi doonaan.
Previous articleCiidanka Dowladda oo fuliyey howlgal gaar ah
Next articleBanaanbax ka dhacay Beled-Xaawo & Mas’uuliyiin ka qeyb-galay